स्वतन्त्रताको जगमा समृद्धिको आशा - सुनाखरी न्युज
Posted on: May 17, 2021 - 10:04 am
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ – प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसँगै संघीय व्यवस्थासम्ममा हाम्रो देशले परिवर्तनका विभिन्न खाले हिंसात्मक र शान्तिवार्ताका इतिहासलाई बनाउँदै आएको छ । विकासका लागि सिद्धान्तका लामा–लामा आशावादी ठेलीमा सपनाका दरबार बने । हिजोको सङ्क्रमणकालीन भयावह र आजको सङ्क्रमणको घाउलाई निको तुल्याएर तङ्ग्रीनुपर्ने बेलामा आजको सरकारसँग असन्तुष्टीका बादल मडारिरहेका छन् । हरेक सामान्य नागरिकले शान्ति, समृद्धिमा अमन चैनको जिन्दगी जिउन चाहन्छ । कसैको दमन, जलन, अत्याचारबाट मुक्त हुन नपाउँदा मानव मन मात्र होइन प्राणी मात्रको दिलमा चोट पुग्छ ।
आज भयावह बनेको महामारीमा प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र मागलाई बोध गर्नु आवश्यक छ । अब पनि देशको हित र अहितको पक्षमा भन्दा बढी पार्टीवादले मुलुक अल्झिरहने हो भने हिजो भनिएको परिवर्तन कसरी सम्भव छ, मननीय पक्ष हो । जजसले जेजे कुरा गरून् ती देश र बहुसंख्यक जनताको हितमा हुनुपर्छ । वर्तमान युगसम्म आइपुग्दा देशका व्यवस्थामा स्वतन्त्रताका लागि सुन्दर कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आज पनि दुरदराजमा कैयौँ जलन छन् । मुकशैलीबाट बालश्रम शोषण भइरहेका छन्– अलिकति विकसित तरिकाबाट, अलिकति पृथक ढाँचामा श्रमिकले साहु–महाजनको हली बन्नु नपरेको भन्ने पनि छैन । हलिया प्रथा, दास प्रथा, झुमा प्रथा या त छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथाको मारमा अभाव र अशिक्षाको जलन छ । विपन्न वर्गका वेदना त्यसै चिमोटिएका छन् । तिनका आवाजलाई टाठाबाठाकै दमनकारी स्वरले सर्लक्क ढाकेर चाकडीबाजकै गुदीले आधार दिनैपरेको छ ।
बाध्ताले, अवसरको आशाले दमनलाई मुकशैलीमा स्वीकार गर्नैपरेको छ । पितृसत्तात्मकता छ, गरिबीको दुर्दशामा अशिक्षा छ, विभेदमा मौका छोपेर उपेक्षाकै स्तरमा निरीहका स्वतन्त्रतालाई पिल्स्याइएका तीता यथार्थ छन् । त्यहाँ वाक्स्वतन्त्रता निमोठिएका छन् । नारी अस्मिता कुण्ठित छ– प्रथाले, समाजले, परम्पराले । हिजो चुनावी दौडानमा राखिएका वाचालाई बिर्सेर आज सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीले दाहोरी खेलिरहने हो भने जनताले तेस्रो शक्तिको खाँचोको महसुस गर्न विवस नहोलान् भन्न पनि त सकिन्न । आज पनि अभावसँग मितेरी लाउनेले नै जो होचो उसको मुखमा घोचो भनेभैmँ अनेक थरी समाजका लाञ्छना व्यहोर्दै गर्दा भ्रष्ट्राचार, पाटीवादी सोच र स्वार्थ, नातावाद, कृपावादले स्वतन्त्रता नै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने मनोवैज्ञानिक पीडा उत्तिकै हुनु लज्जास्पद कुरा हो । सूक्ष्मातिसूक्ष्म कामका लागि सरकारी कार्यालयमा या त निजीमा आखिर निरीहका आवाजमा साँच्चै पीडादायी जलन छन् । कर्मचारीतन्त्र, व्यक्तिको आनीबानीका कारण बोल्न नसक्ने र कुनै पाटीगत शक्तिलाई भिरेर हिँड्न नसक्ने वा नचाहनेमाथि हस्पिटलदेखि हरेक संवेदनशील कार्यमा समेत् हैरानी हुन्छ, पीडा हुन्छ, बेवास्था गरिन्छ । यी तीता सत्यप्रति आवाज कुनै सामान्य गफ होइनन् तर यस्ता खाले बिलौना खोलाका गीत बनिरहनु हृदयविदारक पक्ष हुन् ।
सरकारी काममा हैरानी र बेचैनीका कारण भ्रष्टाचार उत्तिकै भइरहेका सुनिन्छन् । सामान्य नागरिकले महङ्गीको मारसँग कसरी झुत्ती खेलिरहने ? उता विदेशमा सपना बोकेर बाहिरिनेले बाकसभरि भएर फर्किरहनुपरेका तीता र कहालीलाग्दा पीडाको समाधान कहाँ छ ? महामारीले देशको अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्दै गइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत मूल्य बढेको छ । करको अप्रत्यासित वृद्धि गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नै दुनु सोझ्याउने परिपाटीमा लागेकै पनि थिए । स्वार्थको पोको अभैm फराकिलो बन्दै गएको भान नभएको भन्ने छैन । अब त उदारवादी कम्न्युनिस्ट शासनको आशा जनतामा छ । बाम एकताको सबलतालाई जनताले नेकपाको बहुमतीय सरकारसँग अब अल्झन र बल्झन होइन साँचो विकास तथा समृद्धिको सपना तुनेका छन् । हामी जनताले, कतिपय सञ्चार माध्यमले केवल सरकारलाई गाली मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र बनाइरहँदा सुझाव र सहयोगचाहिँ कसले गर्ने !
संघीय शासनसँग यो मुकपीडाको सुधारप्रति जनताको आशा र अपेक्षा छ । हातमा सीप, बौद्धिकता या त क्षमता भएका व्यक्तिले विदेशिनु परेका सत्यको आँकलन सिद्धान्तमा सीमित छन् । शक्ति र सामथ्र्यले गाँजेको पद्धतिले शैक्षिक बेरोजगारिता र मनोवैज्ञानिक जलनमा विसङ्गती छ । अलिकति आशा छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने महायज्ञमा रेखी हालिएको छ । संघीय शासनका लागि यी आशा र अभिलाषाका परिशिष्टमा रहेका मागको सम्बोधनका लागि निर्वाचित नेतृत्वका लागि विशेष मौका हो । अब क्षमतावान्ले प्रमाणपत्रलाई सिरानी लगाएर सुत्नुनपरोस् । कुना कन्दरालाई चियाएर अलिकति विकासको बास्ना छर्नु संघीय शासनको सुनौलो अवसर त्यहाँ छ । आगतको घडीले यिनै सपनालाई काँधमा राखेर हिँड्ने ठूलो आशा छ– स्वतन्त्रतासँगै । चाहे अभाव होस्, चाहे गरिबी होस्– स्वतन्त्रताको महानतामा दया, मानवता, बन्धुत्वका भाव जागृत हुन्छन् । खान, बस्न र सुत्न त जेलका मानिसलाई पनि दिइन्छ । सुरक्षा व्यवस्था त्यहाँ झनै कडा हुन्छ, आधारभूत आवश्यकता पनि त पूरा भएकै हुन्छन् तर त्यहाँको अभाव रहेछ– स्वतन्त्रता । स्वतन्त्र मुहारमा खुसीको रङ पोतिन्छ । हरेक सजीव प्राणी आफ्नै स्वतन्त्रतामा जिउन चाहन्छ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवले न्यायोचित व्यवहार गर्न पनि जान्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भनेका छन्– “स्वतन्त्रता राष्ट्रको अनन्त यौवन हो ।” खुला आकाशमा निर्बाध उड्ने सुँगालाई पिजडाको संसारभित्र कँज्याइएको सुविधाभन्दा चारोको खोजीमा धित मरुन्जेल प्रकृतिको काखसँग विचरण गर्दाको मजा बेग्लै हुन्छ । “पिजडाको सुँगा” कवितामा अभिधा र व्यञ्जनात्मक भावलाई समेट्दै सुँगाको स्वतन्त्रतासँग जनताको स्वतन्त्र सत्ताको आवाजलाई कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले गुन्गुनाएका आवाजमा इतिहासको स्मरण छ–
सपनाबिच पनि रतिभर छैन ।।”
आफ्नो गतिविधि वा कार्यमा स्वाधीनता अर्थात् बन्धन नभएको स्थिति हो –स्वतन्त्रता । नेपालको संविधानले भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १७ मा “कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी स्वतन्त्रताको मूल्यलाई शङ्खघोष गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने साथै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता स्वतन्त्रतालाई संविधानले लिपिबद्ध गर्न चुकाएको छैन । भाग ३, धारा २६ मा ‘धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने’ धार्मिक स्वतन्त्रताको आवाजले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ ।
बीसौँ शताब्दीतिर नारी स्वतन्त्रताको सम्मानमा घन्किएको बिगुल; समावेशी बगैँचामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सहिष्णु सद्भाव सबै क्षेत्र र विषयवृत्तमा स्वतन्त्रताकै चाहना बुलन्द हुँदा रहेछन् । स्वतन्त्रताको बाहुलीमा हक र अधिकारले फस्टाउँदा मानिसमा भलै भौतिक सम्पन्नता नहोस् तर मनोवैज्ञानिक आनन्द मिल्छ । हाम्रो संस्कार, परम्परा अनि प्राचीन इतिहासको रामराज्यदेखि पृथ्वीनारायणले समेत् एकतासँग राज्य एकीकरणको अर्जुनदृष्टिमा स्वतन्त्रतालाई जोड दिएका हुन् । आजको अत्याधुनिक युगमा संघीय व्यवस्थाभित्र हरेक नागरिक हक र अधिकारले समावेशी परिवेशमा स्वतन्त्रताकै विषय सारलाई शिरोधार्य गर्न चाहेको महसुस हुन्छ । हरेक प्रतिभाले स्वतन्त्रतामै जाग्न पाउँछन् । अवसरको ढोका स्वतन्त्रताबाटै उघ्रिन्छ । अर्बौँ डलरमा किन्न नसकिने खुसीको प्राप्ति नै स्वतन्त्रताले दिने उपलब्धि रहेछ । स्वेच्छाले राष्ट्रसेवा गर्नेहरूका लागि खुलेर आफ्नो पौरख र पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्ने सबल मार्ग प्रशस्त गराउँछ । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । स्वतन्त्रताभित्रका कमजोरीकै कारण राजनैतिक बेथिति बढ्दो रहेछ । शाषक वर्गमा सत्ता र भ्रष्टाचारको अखडालाई सहज बनाइदिएका पक्षमा कानुनको गाँठो भने कडा हुनैपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा असचेतता र अशिक्षाका कारण अल्पसङ्ख्यकका समस्या ओझेलमा पर्ने डर हुने हुनाले व्यक्तिगत समस्यामा जान संघीय शासन दह्रो बन्नुपर्छ । गरिबी, महङ्गीको मार, बेरोजगारीजस्ता समस्याले त आज स्वतन्त्रता नै बाँदरको हातमा नरिवल भएको पीडादायी यथार्थ छँदै छन् ।
सुविधाभोगी मपाईँत्व बढ्दा राष्ट्रहीतको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थले सीमा मिचे पनि शक्तिलाई स्विकार्नै पर्ने विडम्बनाले राज्य व्यवस्थापनको स्वतन्त्रतालाई धक्का पु¥याउँछ । राजनैतिक अस्थिरता, अशान्तिपूर्ण आन्दोलन, हिजो भएका चक्काजाम, विरोधी होडबाजी शैली भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याइएका घातक कार्यले हुन् या आन्दोलन नगरे कुरै सुनुवाई नहुने समस्यालाई नियाल्दा जनताको सुनुवाई हुने विभाग नै खडा गरी न्यायोचित संयोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा सचेतनाको आवश्यकता छ । दादावाद बढे समाजको आदर्शतामा घात पुग्न जान्छ । सात्विक, निष्पक्ष सेवा गर्नेमा उत्साह मर्छ । आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा विकृत पक्षले डेरा नजमाओस् भन्नका खातिर समन्वयकारी मध्यमार्गमा अब त जनताले आन्तरिक स्वरोजगारमा आफ्नो सीप र क्षमतालाई निर्बाध पोख्ने अवसर पाउनुपर्छ । यसर्थ वैयक्तिक, राजनैतिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, पारिवारिक, नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता व्यापक परिधिमा मानवीय सुख, अमन–चैनका पक्ष गाँसिएका हुन्छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा हिजो निकै उठे तर सत्य र निष्पक्षताका कुरा भुल्दै गएको प्रतीत हुन्छ । मानवीय हक र विविध अधिकार प्राप्तिका पक्षमा स्वतन्त्रताकै लडाइ भइरहेका छन् । विश्व परिवेशलाई अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने हामी त गौरव गर्न कञ्जुस्याईँ गर्नुपर्नेमा पर्दैनौ सायद । संसारमा अभैm कठोर शासनको जलनमा जनता आजित छन् । म्यानमारको स्वतन्त्र शासनका निम्ति आङ सान सुकीको प्रशंसनीय कोसिस जारी छ । नेल्सन मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकालाई स्वतन्त्रता दिलाएको धेरै भएकै छैन । अब्राहम लिङ्कनले करिब चालीस लाख दासदासीलाई दासत्वको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाएर स्वतन्त्रताको सुगन्ध छरे । महात्मा गान्धीले अहिंसा र सत्मार्गको आडमा रहेर अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट भारतमा स्वतन्त्रताको बिगुल घन्काए । उनले त्यहाँ कृषकहरूलाई जगाउँदै गर्दा पं. जवाहरलाल नेहरूले बुद्धिजीवीलाई तान्दै सपेटी पारेर भारतीय स्वतन्त्रतामा हात दिए । १६ जुलाइ १९१७ मा लेनिनले रूसमा समाजवादी क्रान्तिसँग सर्वसाधारणका लागि स्वतन्त्रताको बाटो दिए ।
निर्दोष सोझा जनताले निशानामा परेर जीवनलाई विनाकारण मृत्युसँग तोल्नु परेका पीडाको हृदयविदारक दृश्य कति त्रासदीपूर्ण हुन्छ । झन्झटिलो र लमतन्ने शैलीले सर्वसाधारण अक्सिजन नपाएर मर्दै छ । कठोर शासन व्यवस्थाबाट उम्केर स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति विश्वका मानव अधिकारकर्मी, स्वतन्त्रताप्रेमी तथा यस विषयमा सरोकार राख्ने अनेकौँ संघ–संस्था चिन्तित छन् । साहित्यले स्वतन्त्रतालाई बोल्छ, निःस्वार्थ मानवीय सेवाले शान्तिप्रेमी मनलाई पगाल्छ अनि जन्मन्छ– त्यहाँ साँचो स्वतन्त्रता । आज पनि मानव समुदायले आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति खुल्न नपाएका विश्व–समाचारलाई हेर्दा संसारको स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको प्राप्तिका तुलनामा नेपाल धेरै अघि रहेको आशामा मुक पीडा भने नभएको होइन । यसर्थ मानिस त प्राकृतिक, राजनीतिक अनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा रम्न चाहन्छ । सम्भवतः अब सङ्क्रमणको सङ्कट चिरेर संविधानको पोयो नभुले जन आकाङ्क्षाका स्वतन्त्र स्वर्णिम स्वप्नाले साकार हुन पाऊलान्, सरकारमा अस्थिर अनि फोहोरी राजनीति नहोला र समृद्धिको बाटो फराकिलो बन्ला हाम्रो चाहना हो ।